Iyadoo qayb ka ah dadaalka aan ugu jirno in aan midayno nidaamka barnaamijka Help Me Grow ee Gobolka Washington Kooxaha Waxqabadkaoo dhan, waxaan abuurnay lix Kooxo Waxqabad ee barnaamijka Help Me Grow ee Washington. Koox Waxqabad (Action Team) ee kaste, oo uu hoggaamiyo Hoggaanka Kooxda Waxqabadkuayaa talo ka bixin doona habaynta iyo horumarinta midba qaybta gaar u ah ee qaabdhismeedka barnaamijka Help Me Grow. Maxaa dheer, kooxaha oo dhan waxay si joogto ah iskugu iman doonaan kulan kooxeed ballaaraan si ay u bixiyaan wararka cusub, u wadaagaan fikradaha ayna u samaystaan xiriirro.
Haddii aad danaynayso in aad ku biirto Koox Waxqabad, fadlan:
Akhriso sharraxaadyada Kooxda Waxqabadka ee hoose, oo eeg xaashida shaqobixinta (ku qoran Ingiriisi iyo Isbaanish).
Daawo siminaarka internetka ee Dhisidda Nidaamka barnaamijka Help Me Grow ee Washington (ama eeg nushkadda PowerPoint ee ku qoran Ingiriisi ama Isbaanish).
Buuxi foomka danaynta ee internetka (diyaar ku ah af Ingiriisi iyo Isbaanish labadaba).
Kooxaha Waxqabadku waxay xoogga saari doonaan anshaxyada caddaaladda jinsiyadeed iyo dhexgelinta, iyadoo hadaf loo leeyahay in la abuuro nidaam cunsurnimada liddi ku ah oo loogu adeego carruurta oo dhan dhalmada ka hor ilaa 5 jir, iyadoo diiradda la saarayo carruurta fursadaha ugu yar haysta. Gunnooyinka safarka iyo daryeelka carruurta, turjumaadda, adeegyada afcelinta iyo gargaarka tignoloojiyeed ayaa diyaar u ah xubnaha Kooxda Waxqabadka.
War dheeraad ah ka hel Hoggaannada Kooxda Waxqabadka barnaamijka Help Me Grow
War dheeraad ah ka hel Kooxahayaga Jinsiyadaha Isku shabbahan
Kooxaha Waxqabadka barnaamijka Help Me Grow ee Washington:
Gacanfidiska Bixiyaha Daryeelka Caafimaadka Carruurta
Dhisidda xeelado suurtogeliya in la wada xiriiriyo adeeg bixiyeyaasha caafimaadka carruurta iyo qoyska iyo barnaamijka Help Me Grow. Waxaa tan ka mid ah dhisidda ama soo saarista qoraallo farriimo leh, ololeyaal gacanfidis ah, tababbar, munaasabado iyo khayraad ama adeegyo kale.
Hubinta in qoysaska iyo ururradu ay ka war hayaan, ayna la xiriiraan, khayraadka ama adeegyada diyaarka ah. Waxaa tan ka mid ah dhisidda ama soo saarista qoraallo farriimo leh, ololeyaal gacanfidis ah, tababbar, munaasabado iyo habab kaloo lagula xiriiro qoysaska si loogala hadlo horumarka carruurta.
Dhisidda xeelado lagu hubiyo in gobolka oo dhan uu ka jiro nidaam wax lagu helo oo isku xiran iskuna duwan si qoysasku ay u heli karaan ayna u isticmaali karaan taageerada loogu talagalay carruurta yar yar. Waxaa tan ka mid ah soo ogaanshaha fursadaha iyo caqabadaha la xiriira tusiyeyaasha ama liisaska khayraadka gobolka iyo degaanka, minbarrada tignoloojiyeed iyo Isuduweyaasha Daryeelka/Hageyaasha Khayraadka Qoyska.
Falanqaynta xogta tilmaamaha (indicator) ee barnaamijka Help Me Grow si aanan loo joojinin wanaajinta nidaamka barnaamijka HMG. Waxaa tan ka mid ah falanqaynta xogta isticmaalka nidaamka, raadinta caadooyinka ama hannaannada waqti ka dib iyo soo ogaanshaha baahiyaha dheeraadka ah ee nidaamka si loo buuxiyo meelaha ka bannaan ama waxyaabaha ka maqan khayraadka.
Soo ogaanshaha qaababka waxqabadka, agabyada iyo xeeladaha suurtogelinaya in caddaaladda lagu dhex dhejiyo nidaamka barnaamijka Help Me Grow. Barnaamijka HMG Washington waxay ujeeddadiisu tahay in uu caddaaladda ama xaqa jinsiyadeed ku dhex daro dhammaan qaybaha dhexe ee isku wada xiran iyadoo la fahansan yahay in loo baahan yahay xeelad iyo waxqabad joogto ah oo lagu fuliyo heer nidaameed, urureed iyo shakhsiyeed.
Soo ogaanshaha iyo u doodista khayraadka ama adeegyada iyo siyaasadaha lagu kordhiyo wanaagqabka carruurta, qoysaska iyo bulshooyinka. Waxaa tan ka mid ah u doodista nidaamka barnaamijka Help Me Grow, iyo weliba baahiyaha lagu soo ogaado barnaamijka HMG.
War dheeraad ah ka hel kooxdayada barnaamijka Help Me Grow!
Haddii aad qabto su'aalo ku saabsan Kooxaha waxqabadka barnaamijka Help Me Grow, fadlan iimayl u dir HMGWA@withinreachwa.org.